April 8, 2013	Comments Off on “Mooraan qabsoo bilisummaa oromoo amma gam tokotti baatee jirti”
April 8, 2013	Comments Off on A REASONABLE DOUBT – The Case of Abyssinian Elite’s Political Culture and Oromo Collaborators
Ee! Of jajjuu manni karaarra!
April 7, 2013	Comments Off on Ee! Of jajjuu manni karaarra!
Obbo Jawar, haala warra ODF/EDF irratti xiinxala gooteef galatoomi. Mata dureen kee dhugaa dha. “Muka jallaa diriirsuun osoo qacaleeti.” Duuba, warri silaa kuni itti …
April 7, 2013	Comments Off on MURNA AFANFAAJJII
April 5, 2013	Comments Off on KAAYOO OROMOO FAALLEYSUUN HIN DANDAYAMU
Ibsa KY- ABO Gaafiin Oromoo gaafii abbaa biyyummaati malee gaafii mirga lammummaa Tophia kadhachuutii miti. Oromoon wanni qabsaawuuf biyya humnaan weeraramee boortaadhaan irra fudhatamte harkatti …
April 5, 2013	Comments Off on Of jajjuu manni karaa irra: Deebii barruu mata-duree “muka Jallaa Diriirsuun osoo qacalee ti” jedhu jalatti obboo Jawaar S. Mohammed Barreesseef
Mata duree “Jallaa Mukaa Diriirsuun Osoo Qacalee ti” jedhu jalatti barruu obboo Jawaar barreesse dubbisee jira. Obboo Jawaar fakkeessuu yaalus, barruun isaa waca ykn …
April 5, 2013	Comments Off on Referendum and election – the real benchmarks for democracy in Ethiopia
I read today that a new Oromo political organization was formed in the U.S. these days, called Oromo Democratic Front (ODF). I understand that this …